Full Serial Number ID Card, Kpamkpam n'ihu Number ID Card, Na-aga n'ihu Serial Number ID Card, Na-aga n'ihu Code ID Card, Na-aga n'ihu Code IC Card, Kpamkpam n'ihu Wiegand Code ID Card, Na-aga n'ihu Number Identification Kaadị, Kpamkpam n'ihu Number EM Card
Kpamkpam n'ihu Number EM Card, Na-aga n'ihu Serial Wiegand Code ID Card
EM Card / LF Card Kpamkpam n'ihu Number EM Card, Kpamkpam n'ihu Number ID Card, Kpamkpam n'ihu Wiegand Code ID Card, Na-aga n'ihu Code IC Card, Na-aga n'ihu Code ID Card, Na-aga n'ihu Number Identification Kaadị, Na-aga n'ihu Serial Number ID Card, Full Serial Number ID Card
The n'ihu Number ID Card nwekwara ike ezoro ezo.
mgbawa: ID: TK4100, EM4305
IC: China mmepụta itinye n'ọkwa IC mgbawa
ọrụ mode: ID: Ọgụgụ naanị
data njigide: > 10 afọ
arụ ọrụ okpomọkụ: -25℃ ~ + 70 ℃
ihe: ịkwanyere, PITA, PETG, ABS, akwụkwọ
size: L85.5mm × W54mm, ọkpụrụkpụ 0.80mm ma ọ bụ 1.80mm ( 1.80mm oké kaadị na a obere oghere )
Full Serial Number ID Card bụ ID kaadị esịtidem Oghere Usoro ọgụgụ increment ma ọ bụ decrementing, ọ nwere ike na-aghọta ihe niile na-aga n'ihu ID koodu, ekwela ka onye ọ bụla n'ime ndị intermittent nọmba. Oghere Usoro ahụ ọnụ ọgụgụ bụ dị na iji nke na-aga n'ihu, mfe akara mkpara na-aga n'ihu ndebanye nke ohere akara nọmba kaadị. Mgbe kaadị ndebanye, na mkpa iji tinye Oghere Usoro ọgụgụ kaadị mmalite na-akwụsị na ibe n'ibe na ya, mfe aha .ID ala ugboro kaadị esịtidem Oghere Usoro ọgụgụ increment ma ọ bụ decrementing: I nwere ike iso na 5-byte hexadecimal esịtidem Oghere Usoro ọgụgụ, esịtidem Oghere Usoro ọgụgụ na ABA (8H) format, esịtidem Oghere Usoro ọgụgụ na WG26 format, ma ọ bụ ndị ọzọ formats. Ọ na ọtụtụ-eji na ubi nke radio ugboro njirimara (ohere akara, oge na ịga, wdg), nke a pụrụ e biri ebi ID kaadị Oghere Usoro ọgụgụ, LOGO, ụkpụrụ, nzuzo, foto na na. The ndabere na-ebipụta 8H-10D 10-bit koodu na ohere akara Wiegand koodu.
The usoro nke mmepụta nke Serial Number ID Card ga-n'ịwa n'efu kaadị, ka mgbe ụfọdụ a ga-enwe a gbajiri nọmba onu, otú a kwa ka a na-akpọ na-azọrọ Serial Number ID Card, ma ọ bụrụ na ịchụso kpamkpam Oghere Usoro ọgụgụ, nwere ike iji na-agụ / dee ID kaadị ka ịgbakwunye. ID kpamkpam Oghere Usoro ọgụgụ kaadị price uru n'elu ndị ọzọ ngwa nke kaadị, i nwere ike na-etinye obere akpa na-ebu.
Itinye n'ọkwa IC kaadị esịtidem koodu bụ na mgbawa mmepụta usoro a gwọrọ, -apụghị gbanwere, si fere fere na IC kaadị ka a mere site bonding, testing, lamination, ebi akwụkwọ, Die-ebipụ na a usoro nke njikọ. Esịtidem koodu nweta Oghere Usoro ọgụgụ ndị ọrụ nke kwa ike. Serial Number IC Card bụ ụzọ ọzọ dee nọmba na a ofu ngọngọ, na mgbe ahụ na encrypt dum oru nke ngọngọ, oge ọ bụla ị na-eji kaadị agụ na-agụ ndị na-nọmba kaadị na ngọngọ iji, ka imeta Oghere Usoro ọgụgụ IC kaadị ọrụ.
The dum usoro nke ide kaadị nwere ike dabere na onye ọrụ kwesịrị ime atụmatụ, ogologo 1-15 akwụkwọ ozi ma ọ bụ nọmba nke n'ịgwa, ọrụ na onye-enyi na enyi na management. N'ihi na izo ya ezo ọrụ nke IC kaadị nwere ike n'ụzọ dị irè gbochie kaadị a na-depụtaghachiri, nche nnọọ elu karịa nke Oghere Usoro ọgụgụ ID kaadị, na mmepụta na-eri nke IC kaadị nwayọọ nwayọọ belata. Oghere Usoro ahụ nọmba IC kaadị ga-eji dochie Oghere Usoro ọgụgụ ID kaadị.
Na-aga n'ihu Number ID Card nwekwara ike ezoro ezo.
Kpamkpam n'ihu Number IC / ID mgbawa nwekwara ike ike n'ime isi mgbanaka, wristband, mkpụrụ ego ego kaadị, Epoxy kaadị na ndị ọzọ shapes.
patrolling usoro, oge bịaranụ usoro, ohere akara, ọnụ ụzọ nche usoro, okporo ụzọ, adọba ụgbọala management, njirimara Nyocha, ire nri management, enterprise management usoro, Otu Card Solutions na ndị ọzọ na ebe nke radio ugboro njirimara.
M m mmasị gị ngwaahịa Kpamkpam n'ihu Number EM Card, Na-aga n'ihu Serial Wiegand Code ID Card
Na Mbụ: 18ibe n'ibe code ID kaadị, 10ibe n'ibe code ID kaadị, 8ibe n'ibe code ID kaadị
Osote: Kpọmkwem Otu Number ID Card, Kpọmkwem Otu Usoro Access Control EM Card